ikhaya STANTS STARS Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNgxelo ye-Untold Biography Facts
Oktobha 10, 2017
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'Urhirho'. Iindaba zethu zeNumanja Matic yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts kuletha iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe kodwa abambalwa abajonga i-Nemanja Matic Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye u-adieu, qalisa Qala.
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi: Obomi bakwangoko
I-Nemanja Matic yazalwa ngo-1st ka-Agasti, i-1988 eSabac, i-SFR Yugoslavia ngu-Dragan Matić (uyise) noBiljana Matić (unina) ababini bezemidlalo.
UMatić uvela eMacedonia owayeyingxenye yeYugoslavia kunye namhla serbia. Abazali bakhe babengumntwana onguMntwana weMfazwe II. Bobabini baseBosnia neHerzegovina, eCroatia, Masedoniya, IMontenegro, iSerbia neSlovenia yayisihlanganiswa njengeYugoslavia.
Wakhula ecaleni komntakwabo, u-Uros bobabini abazuze ifa lezemidlalo kubazali babo.
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi:Umsebenzi woLutsha
Umncinane waqala umsebenzi wakhe kwiminyaka emihlanu (1993) kunye neqela lebhola lebhola le-Vrelo elalilo xesha liqeqeshwe nguyise wakhe owabeka isiseko sokukhishwa kwakhe komntwana wakhe wokuqala. Ngeminyaka eyi-10, abazali bakaMatic bamvumela ukuba athathe isinyathelo esiqinileyo esamshiya ekhaya ukuba ajongane nomsebenzi ngaphandle kokuphazamiseka kukayise. U-Obrenovac 1905 wayeyindawo yokuqala yokuhamba kuyo ngonyaka we-1999.
Iindaba zeNumanja Matic yabantwana
"[Ukuhamba ekhaya] kwakunzima kum kuba ndingu 9 nje," wongezelela. "Kwakuyinyathelo elikhulu kumsebenzi wam oselula eSerbia. Kwakungekho kusondele kakhulu kwidolophu yasekhaya ukuze ndikwazi ukubuyela emva kweveki nganye kwaye xa ufana nje ne-9, ungaziva intlungu. Kamva, izinto zaba ziqhelekileyo. Ibhola lihlala liwumsebenzi wam kwaye ndiyakonwabela. Inkxaso evela kwintsapho yam inceda. Iphupha lam lokufuna ukudlala ibhola kwinxalenye ethile yaba yimpumelelo "
Kamva waphumelela ukuqhubeka nomsebenzi wakhe wolutsha kwiqela lebhola lebhola lebhola le-3 eyahlukeneyo eyi-Red Star eBelgrade, i-Obrenovac 1905, i-Red Star i-Belgrade, iPartizan, i-Jedinstvo Ub. Oku kwenzeka phakathi kwe-1997 ukuya kwi-2005. I-suport yangaphambili kayise yayisisiseko kwimpumelelo yakhe kule miklabhu. I-Matic yaziwa ngokuqeqeshwa kakhulu kwaye ibe ngumdlali obalaseleyo kuzo zonke iiklabhu ezikhankanywe ngasentla. Unyaka we-1997 kwi-2005 wayaziwa njengeminyaka ebekhulile kakhulu.
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi:Professional Career
Umsebenzi wakhe oqaqambileyo waphawula nguKolubara, apho waqala khona umsebenzi wakhe wobugcisa ngonyaka we-2005. Udlale eklabhu iminyaka emithathu, kodwa akazange aphumelele ukufumana indawo kwinqanaba elinesibhozo, enze kuphela ukubonakala kwe-16. Ngoko inhlanhla kumfana omncinci ovakalelwa kukuba umsebenzi wakhe uya kugqiba.
Esikhundleni sokubanjelwa ekuhluphekeni kwakhe, waqalisa ukutshintshwa kwiqela leSlovak Košice kwi-2007 eyamthanda.
Kwakhona, ngenkathi ehlala kweli lizwe, wafumana ubuhlali besiSlovak.
Enyanisweni, ixesha elichithwe kunye neklabhu lajika liba nethamsanqa kumdlali, njengoko umqeqeshi amjonga ukuba ungumdlali onamandla kakhulu kwaye mvumeleke entsimini ngokuqhelekileyo. Ngokonke, iSerbia yenza i-70 ibonakale kwaye idibanise iinjongo ezine kumaxesha amabini eqela. Isimo sakhe sengqondo sokufa sasikhokelela i-Chelsea FC i-scouts ingqongqo emagqabini akhe emnyango. U-Chelsea wayefuna ukutshintsha indawo kaMalalele ngelo xesha.
Umsebenzi weNtsha yeNyanja Matic
Ngokuchanekileyo kwi-2009, abadlali abavela e-Chelsea banomdla kuMatić. Ehlobo lase2009, isivumelwano seminyaka emibili sisayinwe. Ukuqala kwakhe ebomini kwiklabhu yaseLondon kwakungekho mpu melelo, njengoko wayebonakala nje ngokuphambanisa nje ngezantsi.
Ngamazwi akhe, Uthi: "Ndandiselula kakhulu," ukhumbula. "Kwimeko yam ukuba ngaba ngabadlali abakhulu, uBollack, uLampard noEssien. Ndiza apha ndalimala - ndineenyanga ezine-ke kwakunzima kum. I-Premier League ayilula kubadlali abatsha kuba kunzima kakhulu, kunzima kakhulu. "
"Kusuka kwiqela leSlovakian ukuya kwiNkulumbuso League akulula. Kwaye bekufana nephupha, kodwa ndandimncinci kwaye kwakungamava amnandi. "
U-Matic wayevuyiswa gqitha ukufumanisa ukuba uya kuba
ebolekelwe ukuhanjiswa. Kwakukho indawo yokuhlala phakathi kweCentral kunye neVitese apho abanye abadlali bebhola baseLondon befumana umqeqeshi kwi-club ye-Dutch club ngeli xesha.
UNomanja wasebenzisa ixesha le-2010 / 2011 kunye neklabhu yesikhashana, iinjongo zombini ezinkundleni ze-27. Ngamazwi akhe, 'EPortugal ndandidla ukudlala nabadlali abancinci kwaye ndiwine yonke ibhola. Kwakungelula kum kunokuba kwinqanaba lenkulumbuso eyayinebadlali abade.
KwakusePortugal ukuba umsebenzi wakhe waguqulwa, ngumqeqeshi uJorge Jesus.
Ehlobo lase2011, ibhola lebhola laseSerbia lagqiba isigqibo esinamandla ebomini bakhe. Umnqweno wokuze ungalokothi ube ngumtshini.
I-Matic yenze idluliselwe eBenfica. Uvuyile ukuba usetyenziswe njengelungu leCentral ukuze ufumane uDavid Luiz, waziva enelisekile ngokushiya iqela. Wajoyina iqela lokuqala ngokukhawuleza kwaye wabonakalisa kwimikhawulo ye-95 kwaye wafumana iinjongo ze-9 kwiqela lePutukezi kwiminyaka emithathu nje. Ngethuba udlala umdlalo, i-Matic yabona ingakholeki. Iqela lakhe elijongene neClean kwi-Final Europa League. Ngona wena iqela lakhe lilahlekile, waqinisekisa ukuba u-delven noDavid Luiz. Oku kwenza i-Chelsea ivuselele umdla kubo, ngeli xesha lithembisa ukumenza umdlali wokuqala wokukhetha.
U-Matic Uthume noDavid Luiz
Konke kwenzeka ngoJanuwari 2014 xa Chelsea wenza inzantya yokwenza ukuba iSerb ibuyele kwiqela elize lihlawule i-25 yezigidi. Zonke, (kunye nokunyuka kwakhe imanchester United) njengoko besithi, yimbali.
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi:Ubomi Bentsapho
I-Namanja Matic ivela kwimvelaphi yentsapho ecebileyo yabase-Athletes. Abazali bakhe u-Dragan noBiljana benza ilizwe labo liqhenyce kwimidlalo. Uyise kaMatic wayengumdlali webhola oqeqeshiweyo, edlala uFK Macva Sabac kwi-1980s eSerbia.
Umntakwabo kaMatić, Uroš, uphinde ube ngumdlali webhola webhola odlala kwiintetho zeDanish eCopenhagen njengethuba lokubhala. Indlela ye-Uros 'yomsebenzi iye yafana neyomntakwabo njengoko bobabini babini baqeqeshwa nguyise kwaye bahamba ngendlela zabo.
Ibali le-Uroš Matic
Ngesinye isikhathi, umgcini wendawo waba nemihlali kakhulu ngethemba lokujongana nomntakwabo Chelsea iqela kwi-Champions League. KwakungumMati omncinci ophelile ekunqobeni.
Xa uNamanja Matic elwa noMzalwan 'uUroš
Uros wazama ukufumana ukuphumelela kukaNomanja kodwa akazange aphumelele kwaye ahlale ekhonkotha kwisithunzi somntakwabo. Ubona umntakwabo omdala njengomntu ohlala ephupha.
Ngamazwi akhe; 'U-Nanja angaba ngumntakwabo kodwa mna ngumdlali wam uqonda indlela yam iphupha kwi-fc copenhagen. Ndicinga ukuba ndiyakwazi ukufumana indawo efanelekileyo apha kule club kunye nokwenza igama elikhulu " wa xelela injongo.
Bobabini babini bachitha iiholide kunye nabahlobo babo abakhulu 'ibhola lebhola ngamacala abo.
Abazalwana Abonwabileyo-Namanja no-Uroš Matić
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi:Ulwalamano lobomi
Ngethuba lokuqala lokupela Chelsea, ixesha libone ubunzima obukhulu, uMatic wanquma ukunika ubomi bakhe ubomi. Wadibana waza wathandana no-Aleksandra Pavić ovela kwilizwe lakhe.
Ulwalamano lweNumanja Matic Ubomi
Ngamazwi akhe; 'Impumelelo yam ebalulekileyo kukuba ndikwazi ukunyanzela uAleksandra ukuba nditshatile'. Bobabini babini babenomtshato wemfihlo kwi-2010.
Izityalo zeMatic zeAlexandra
Umtshato kaMandanja Matic u-Aleksandra ngokwenene waphumelela kwimisebenzi yakhe. Wamnika isikhuthazo esifanelekileyo esasingenako. Akungabazeki ukuba intsika yakhe kunye nomgqugquzeli wakhe. Bobabini babelane ngexesha eliyimpumelelo elihlangeneyo.
UAleksandra Pavić uyabhiyozela nomyeni wakhe
Umtshato kunye nomtshato wase-Aleksandra baye bafumana intsikelelo. Bobabini banendodana.
Ngezantsi umfanekiso okhangele kwi-agent estate njengoko bekulungele ukufuduka ukusuka eLondon ukuya eManchester.
Nemanja Matic kunye noLuthando lobomi bakhe
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi:Ukuhlawula i-Village Depts
Uyaziwa ngokuvelisa kwakhe kwisixeko sasekhaya saseSafe eMarcedonia, serbia. Uncedise inqila yakhe ukubuyisela umva wayo.
I-Nemanja Matic iphuma kwiDett Village
I-Matic iye yanikezela kwiqela lakhe elidala u-Obrenovac 1905. Wanikela ngemyuziyam ukuya kwiqela.
I-Nemanja Matic inikela iMyuziyam kwiqela elidala
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi:Ukuhlangana kwakhona neNgcaciso
UMatic wayevuyiswe ukuba aphinde ahlangane nomphathi wakhe wangaphambili Jose Mourinho.
In Jose Mourinho magama; "UNdingathanda ukumbulela ngomnqweno wakhe wokujoyina ngenxa yokuba ngaphandle koko, akunakwenzeka ukuba naye apha. Ndiqinisekile ukuba abadlali bethu nabalandeli baya kumthanda. Ukwamkelwa okukhulu kwinombolo yethu entsha 31. "
Kumagama kaMatic; "Ndivuyiswe ukuba ndijoyine iManchester United," wongezelela. "Ukusebenza kunye noJoseph Mourinho kwakhona kwaba ithuba lokuba andiyi kuguquka. Eli lixesha elihle gqitha leqela kwaye ndikulindele ukudlala indima yam ekwakheni imbali engaphezulu yale club. ""
Jose Mourinho Uthando lukaNomanja Matic omnye komnye luya kwesibini.
I-Bond phakathi kweN Nemanja Matic noJose Mourinho
Mourinho wabona ukukhanya okuluhlaza ekuxosheni iMatic emva kokuphawula SikaAntonio Conte Umzila wesondo okhuselayo unomdla wokulala Tiemoure Bakayoko, N'Golo Kante.
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi:Ukufumana uncedo kumhlobo omdala
I-Matic yamukelwa kwiseshoni yokuqala yokuqeqesha enye yangaphambili Chelsea umdlali -Juan Mata owambonisa waza wamnceda ukuba ahlale phantsi.
Ukuhlangana kwakhona kweNamanja Matic kunye nomhlobo omdala
Zombini iMatic kunye Mata wabelana ngobuhlobo obusondeleyo ngexesha lopelo lwabo e-Chelsea FC.
Iindaba zeNumanja Matic yeBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi:Ukhetho lwe Car
Ekugqibeleni kwizinto malunga ne-Matic yindlela yakhe yokukhetha imoto. Kuzo zonke iiklabhu ahambayo, ukhetha ukuba ubuncinane imoto enombala ofanayo nejezi yeklabhu. Le yimeko yezo zombini Chelsea kwaye imanchester United njengoko kuboniswe ngezantsi.
Ukukhetha imoto kaMatic ukufanisa imibala yeeklabhu
Uthande iMercedes xa kuziwa ekuqhubeni izithuthi ezinkulu.
I-Mason Greenwood Ibali loBuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali lika-Aaron Wan-Bissaka loBuntwana I-Untold Biography Facts
I-Nelson Semedo Ibali leBantwana leNdaba yeNgxelo ye-Untold Biography Facts
I-Andre Gomes Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
OBALULEKILEYO BAMABALI AMABALI abantwana
Disemba 14, 2019
AMANQAKU AMANQAKU KWAKHO
I-Federico Valverde Ibali loBuntwana leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
Disemba 9, 2019
I-Thibaut Courtois Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Julayi 22, 2017
Ibali le-Jesse Lingard yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
Novemba 2, 2017
U-Andy Cole Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Disemba 30, 2017